“Maxaa mar kasta loo aqbalayaa codsiga Kenya?” – DF Somalia oo ay su’aal adagi hortaallo, arrin ay samaysay oo shaki abuuray & tillaabo ay qaadi jirtey dowladdii ka horreeysey oo… | Hadalsame Media
Home Maqaallada “Maxaa mar kasta loo aqbalayaa codsiga Kenya?” – DF Somalia oo ay...
“Maxaa mar kasta loo aqbalayaa codsiga Kenya?” – DF Somalia oo ay su’aal adagi hortaallo, arrin ay samaysay oo shaki abuuray & tillaabo ay qaadi jirtey dowladdii ka horreeysey oo…
(Hadalsame) 20 Maajo 2020 – Bismillah, Maxkamadda Caddaaladda Dunida (ICJ) ayaa maanta markii 3-aad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda badda ee ka dhaxeysa #Soomaaliya iyo #Kenya. Saddexda jeerba waxaa codsiga dibu dhigista lahaa Kenya.
Waxaa Qoray: Cabdi Caynte, Wasiirkii hore ee Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah
Previous articleDal aan laga filaynin oo Masiixi ah oo Ciidaha Muslimka u aqoonsaday FASAX QARAN
Next article”Nooma iman kartaan!” – Imaaraadka oo Yaman ka dhisay wax u eg maamullada Somalia (Dowladda Dhexe oo uu durba isku taagey!)